Mandeha Finday ny Alatsinainy Cyber Martech Zone
Mandeha Finday ny Alatsinainy Cyber
Alahady, Desambra 15, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Izahay dia nizara infografika iray taonina momba ny tombotsoan'ny varotra finday ary efa nanome porofo vitsivitsy fa, amin'ny fialantsasatra, fifanakalozana finday - na mcommerce - dia ho lasa goavana. Tena nandiso fanantenana tokoa!
Hatramin'ny namoronana azy tamin'ny 2005, ny Alatsinainan'ny Cyber ​​dia nitombo lasa andro fiantsenana lehibe indrindra amin'ny taona. Ny fiantsenana an-tserasera amin'ity taom-pialan-tsasatra ity dia antenaina hitombo 15% amin'ny $ 2 miliara. Ny dokam-barotra lasibatra amin'ny sehatra sosialy toy ny Facebook sy ny fampiakarana finday mihabe no ivon'ny fivarotana an-tserasera, izay lasa foto-tsakafo fialantsasatra faran'izay haingana.
Ampush dia nanome an'ity sary ity, mandeha amin'ny alàlan'ny finday i Cyber ​​Monday mba hanehoana ny fiantraikany:
Tags: 2013cyber mondaymcommercefifanakalozana finday
Distimo: App Analytics, fanovana ary fanarahana App Store
Ny lesona miafina an'ny Google sy Facebook
Dec 16, 2013 amin'ny 5: 29 AM
lahatsoratra tsara hafa Doug! Namaky be sy nahalala zavatra…
Dec 16, 2013 amin'ny 6: 33 AM
Mahagaga fa mihetsiketsika haingana ny teknolojia ankehitriny. Mahita olona tsy tapaka amin'ny findainy finday aho, ary mino tanteraka aho fa io no iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahazoana mpanjifa vaovao na mitazona ny taloha. Ny Facebook, indrindra, toa ny voalazanao, dia fomba tsara amin'ny varotra. Mino koa aho fa ny famerenana manokana, toa io voalazanao io ihany koa, dia fomba iray lehibe hamoahana ny teny momba ny vokatra tsara iray.
Manontany tena aho hoe amin'ny fomba ahoana no mifanaraka amin'izany ny varotra amin'ny takelaka? Mahita olona maro kokoa mitondra ny takelaka misy azy isan'andro aho, indrindra ireo olona amin'ny demografika taloha. Angamba fitaovana / tsena tokony hikarohana bebe kokoa ity. Misaotra noho ny sary lehibe!
Dec 16, 2013 ao amin'ny 3: PM PM
Ny ankamaroan'ny statistika any ho an'ny finday dia misy ny varotra takelaka, @monicawomble: disqus
Dec 17, 2013 amin'ny 6: 37 AM
Lehibe. Noheveriko fa mety ho miharihary loatra izany raha tsy tafiditra ao anaty statistika 😉